crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> September | 2017 | HimiloNetwork
Faa’iidooyinka laga helo cunista Sabiibka.
Zakariya September 30, 2017	Leave a comment 3,089 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Sabiibka oo afka qalaad lagu yiraahdo raisins, wuxuu ku jiraa qudaarta faakihaysiga loo cuno. Balse in badan kamid ah faa’iidada caafimaad ee ku jirta lama socdaan. Waxaana jira faa’iidooyin aan lasoo koobi karin oo kugu sii qasbaya inaad sii isticmaasho ama hadda kadib aad bilowdo cunistiisa. Wuxuu daweeyaa calool-fuurka. Wuxuu sare u qaadaa miisaanka qofka – culeyska. ...
Zakariya September 30, 2017	Leave a comment 975 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Markii Alle uu Qur’ankiisa noogu sheegay inuu Shinnida ugu wax-yooday inay hoy ka dhigo buuraha iyo geedaha iyo wixii soo raaca – kadibna ay cunto miraha oo dhan, wuxuu Eebe nooga soo saaray sharaab kala duwan midab ahaan caafimaadna u leh bani’aadanka. Maanta waxaa timid in si qoto dheer loogu fogaaday culuumta la xiriirta Shinnida iyo wax ...
Induniisiya – Qashin ku beddelo Ceymis Caafimaad oo bilaash ah.
Zakariya September 30, 2017	Leave a comment 370 Views
Jakarta (Himilonetwork) -Si dadka loogu muujiyo in daryeelka aas’aasiga ah ee caafimaadka uusan qaali noqon karin iyo in qashinku uu leeyahay qiimo sarreeya, hal-abuur da’yar Induniisiyan ah ayaa la yimid fikrad mira-dhal ah oo dadka saboolka ah u sahlaysa inay baahida caafimaad oo ay qabaan iskaga bixin karaan qashinka. Ceymiska lagu magacaabo Garbage Clinical Insurance oo uu yagleelay da’yar Induniisiyan ...
Doorka aqoon-yahanka iyo ganacsatada iyo kahor-tagga tahriibka.
Zakariya September 30, 2017	Leave a comment 328 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Markii ugu horreysay oo aan meel ka baxsan dalka kula kulmo da’yar tahriib u geyfan waxay ahayd sanadkii hore kolkii wiil yar oo kasoo jeeda qoys nolol ahaan iska ladan aan kula kulmay magaalada Nairobi. Wuxuu safar qarsoodi ah – isaga oo caafimaad qaba – uga soo anba-baxay magaalada Muqdisho. Nasiib-darro wuxuu yimid Kenya isaga oo la ...
Zakariya September 30, 2017	Leave a comment 244 Views
Toronto (Himilonetwork) – Qalinyahan Muslim ah oo ku nool Mississauga ayaa ku guuleystay abaal-marinta hal-curiyaha sanadka 2017 – oo ah mid ay bixiso Iskaashatada EPSO laguna aqoonsado howlkarnimada iyo qalliimada daweynta cudurrada aadka ugu daran indhaha. Dr. Iqbal K. Ahmed waxaa abaal-gudka loogu deeqay maalintii Khamiista. Waxaa loo aqoonsaday mid kamid ah dhaqaatiirta ugu fiican ee ku gaaroobay daweynta iyo qalliimada indhaha guud ...
Masha Allah – Nin si cajiib leh ugu muslimay gacanta nacab Islaamka.
Zakariya September 30, 2017	Leave a comment 291 Views
London (Himilonetwork) – Nin maqlay yeermada hoggaankii hore ee Leegada Difaaca England, Tommy Robinson oo fogaan-araga qaranka kaga soo muuqday isaga oo nuqul kamid ah Qur’anka haya – una sheegaya dadka inay aqriyaaan, ayaa waanadiisa u qaatay si dhab ah: wuuna islaamay. “Wuxuu yiri aqriya Qur’anka – isaga oo moodaya inay dadku nici doonaan Islaamka. Hayeeshe waxaan arkay runta. Waana islaamay,” ...
Zakariya September 27, 2017	Leave a comment 222 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Furriintu ma ahan wax fudud, hayeeshe wuxuu kasii adag yahay Maxkamadda Yibin People’s Court oo ku taalla gobalka Sichuan, halkaas oo hal garsoore uu dhawaan dhaqan-geliyay imtixaan furriin oo labada lammaane ay qasab tahay inay ku dhacaan si codsiga furriinkooda uu ku ansaxo. Imtixaan furriinku waa fikrad uu lahaa Wang Shiyu – oo ah garsoore kamid ah maxkamadda Yibin, ...
Daawo Niman Naafo ah oo beeray Keyn qurux badan.
Zakariya September 27, 2017	Leave a comment 308 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Laba jiil oo kala danbeeyey waxay ku qaadatay 60 sano in ku dhow inay keyn gacan ku sameys ah ka dhigaan goob lama degaan ahayd oo ku taalla waqooyiga Shiinaha. Hadda dadaalkoodu kaliya ma noqon mid laga mahad-naqay ee dhaxalkooduna wuxuu ku haray in jiilba jiil uu usii gudbiyo. Ku dhawaad 500,000 oo geedo ah ayaa ku ...
Daawo – Nin lama-degaan u beddelay keyn duur-joogtu ku nooshahay.
Zakariya September 27, 2017	Leave a comment 265 Views
Delhi (Himilonetwork) – Hindiya waa dalka ugu da’yarta badan caalamka, waxaana jira dhalinyaro u istaagta badbaadinta deegaankooda. Mid kamid ah dhalinyaradaas wa Jadev Payeng oo ku dhawaad 40 sano ay ku qaadatay in meel lama degaan noqotay uu dib ugu celiyo keyn ay ku kulmaan noolaha kala duwan siiba duurjoogta. Haddaba halkan ka daawo muuqaal aan kasoo qaadanay.
Muslimiinta Rohingya – Gaajada iyo Hoy la’aanta waxaa usii dheer Kufsi ba’an.
Zakariya September 27, 2017	Leave a comment 279 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Daraasin haween Muslimiin Rohingya ah waxaa kufsaday ciidamada militariga Burma xilli tira-yartani wajahaan wax ay QM ku tilmaantay Buugga Isir-sifeynta oo kaga imaanaya dalka Buudiska u badan ee Myanmar. Niranta Kumar, oo katirsan IOM ayaa sheegtay inay kiisaska kufsiga ay hadba isasoo tarayaan, dhibaataduna aysan u muuqan mid dhammaad yeelanaysa. Waxaana jira haween dhowr jeer la kufsaday ...
Japan – Marka Ilmuhu aanay daqiiqad moogaan karin hooyadood!
Aabo soo kireystay nin iska dhiga wiilkiisa oo dhintay si uu hooyadiis uga ilaaliyo inay ogaato dhimashadiisa
Sheekada ku dahsoon Kashmiir !!
Q7aad: Ereyo iyo Oraahyo Jaceyl xanbaarsan.